कमला घिमिरे र रोमन रिजालको पहिलो गीत म्याउँ बिरालो (भिडियो सहित). – live 60media
कमला घिमिरे र रोमन रिजालको पहिलो गीत म्याउँ बिरालो (भिडियो सहित).
काठमाडौं । अभिनेत्री ऋचा शर्माले अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर नयाँ चलचित्र ‘कौसीद’ निर्माणको घोषणा गरेकी छन् । कुमार भाष्करले निर्देशन गर्ने यस चलचित्रलाई केदार भुषाल निर्माता रहने जनाइएको छ । यो चलचित्रमा अभिनेता भोलाराज सापकोटा र अभिनेत्री ऋचा शर्माको प्रमुख भूमिका रहनेछ ।
दीमेश श्रेष्ठको कार्यकारी निर्माता रहेको यो चलचित्रका सहनिर्माता लक्ष्मण बाँनिया रहेका छन् । चलचित्रमा बैंकबाट ऋण लिने मानिसको कथालाई प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ । चलचित्र सार्वजनिक फस्टलुकमा चलचित्रको कथालाई सांकेतिक रुपमा देखाउने कोशिस गरिएको छ । अभिनेत्री ऋचाले आफ्नो प्रस्तुतिमा बन्न लागेको चलचित्रलाई नयाँ जोश र उत्साहका साथ बनाउने बताएकी छन् । सौर्य दैनिकमा खबर छ । यो चलचित्र उनको चौंथो हो । यसअघि उनले चलचित्र आधा लभ, भिसा गर्ल र सुनकेशरी बनाइसकेकी छन् । केही समयअघि ‘डिजिटल सिनेमा घर’ एपको घोषणा गरेकी उनी अहिले भने नयाँ फिचर चलचित्रका साथ देखापरेकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ‘कौसीद’ को घोषणा गरेकी हुन् । चलचित्रलाई नवविनय श्रेष्ठ र धिरजन थपलियाले लेखेका हुन् । अभिनेत्री ऋचाले चलचित्रले काठमाडौंमा घर बनाउने सपना देखेको मध्यमवर्गीय परिवारको कथा प्रस्तुत गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘एउटा इमान्दार परिवार कसरी घर बनाउने चक्करमा भ्रष्ट हुँदै जान्छ भन्ने फिल्मको कथा हो । उनले बैंक ऋण र यसका आयाम पनि कथामा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने जनाइन् । संस्कृत भाषाको ‘कौसीद’ को अर्थ ‘ब्याजखोर’ भन्ने अर्थ हुन्छ । ऋचाले चलचित्र १ माघबाट फ्लोरमा जाने बताइन् । उनका अनुसार काठमाडौं वरिपरी छायांकन गरिने यो चलचित्र २० दिनमा सकिने छ ।
← कत्ति पनि इन्कार नगरी पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस्, चिताएको काम पुरा हुनेछ !
संसार`कै बढी उमेरका दाजु`भाई (जुम्ल्याहा) रोनी र डोनीको नि’धन →